कुवेतमा ६ वर्षसम्म कमाउन नसकेकाे पैसा गाउँमै च्याउखेतीबाट अार्जन, १६ हजारबाट १ कराेड ! - Kendra Khabar
कुवेतमा ६ वर्षसम्म कमाउन नसकेकाे पैसा गाउँमै च्याउखेतीबाट अार्जन, १६ हजारबाट १ कराेड !
२०७५, २४ कार्तिक शनिबार ०७:३३
परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्न र साहूको ऋण तिर्न भन्दै लालबहादुर सुनार १२ वर्षअघि विदेश लागे । छ वर्ष कुवेतकोे गर्मीमा बिताउँदासमेत परिवारको आर्थिक अवस्था उस्तै रह्यो, साहुको ऋण पनि सकिएन । विदेशबाट कमाइ गरेर फर्किए पनि ऋण तिर्दा उनीसँग पैसा बाँकी रहेन ।